Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Taariikhaha cusub ee ITB Berlin: Maarso 9-13 toos iyo qof ahaan
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wtn
Sannadka 2020 ITB waa la joojiyay maalmo uun ka hor inta aan la moodin in dhacdada la iibiyay bilaabanto. eTurboNews ayaa saadaaliyay baajinta, laakiin waxa uu joogay Berlin oo bilaabay dooda dib u dhiska, oo ay weheliyaan PATA iyo Guddiga Dalxiiska Afrika. 2022 doodani waxay ka sii socon doontaa Berlin - markan iyada oo ITB la filayo inay noqoto mid xoogan oo nool.
Messe Berlin, oo ah qabanqaabiyaha ITB ayaa xaqiijiyay in bandhigga ganacsiga ee warshadaha safarka uu soo laaban doono.
ITB waxa la qorsheeyay March 9-13, 2022 gudaha Jarmalka Caasimada
Fikradda G2 waa la dabaqi doonaa. Waxay la macno tahay kaliya booqdayaasha la tallaalay ama la soo kabsaday ama bandhigayaasha ayaa la ogolaan doonaa.
Sannadka 2022 Bandhigga Safarka Adduunka ee ugu weyn ayaa si toos ah ugu soo laabtay Berlin, iyadoo leh dhacdo shaqsi ah iyo adeegyo la taaban karo si ITB Berlin looga dhigo khibrad caalami ah mar kale.
Tani waa war wanaagsan Huteelada Berlin, darawallada tagsiga, makhaayadaha, shirkadaha diyaaradaha, iyo qof kasta oo kale oo adduunka ah oo ka dhigaya nolol-maalmeedka socdaalka iyo warshadaha dalxiiska.
Waa horumar togan u leh dunida dalxiiska, iyo kalsoonida lagama maarmaanka u ah soo kabashada qaybta,
The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxay ka bilaabatay Berlin bishii Maarso 2020 iyadoo ay weheliso ITB-da la joojiyay. "Waxaan rajeyneynaa inaan ku kulanno Berlin sanadka 2022 iyadoo ITB ay dhacayso," ayuu yiri Juergen Steinmetz, guddoomiyaha, iyo aasaasaha ururka oo ay xubno ka yihiin 128 waddan.
ITB waxay dejisay lahjadda isagoo leh:
"Xaalada sharci ee hadda jirta awgeed, ka qaybgalayaasha si buuxda loo tallaalay ama la soo kabsaday ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan dhacdooyinka illaa ogeysiis kale (sharci 2G)."
Haddaba, marka loo eego xaaladda sharci ee hadda jirta, bandhigayaasha iyo booqdayaasha ITB Berlin 2022 waa in dhawaan la soo kabsaday ama si buuxda loogu tallaalaa Midowga Yurub ayaa ansixiyay tallaalka COVID-19 oo keena caddaynta tan shahaado dijital ah oo EU ah.
Sida laga soo xigtay Claudia Dallmer, Kaaliyaha PR ee ITB, booqdayaasha aan EU-da ahayn waa inay ku fiican yihiin shahaadooyinka la ansixiyay ama waxay u rogi karaan kaadhka tallaalka dukumentiyada EU.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa soo bixi doonta, sida ay sheegtay Ms. Dallmer.
Waqtigan xaadirka ah, Messe Berlin waxay ku ballanqaaday shabakadeeda:
Bilihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen sida ay muhiimka u yihiin kulammada fool-ka-foolka ah ee u dhexeeya dadka. Dhacdooyinka sida kuweena ah waa garaaca wadnaha ee warshadaha. Bandhigeyaal iyo booqdayaal ganacsi ahaan waxaad ku jirtaa hawsha dhexda. Sannadka 2022 hal shay ayaa muhiim ah: kulammadaadu waa inay noqdaan kuwo badbaado leh oo guuleysta intii ay awoodaan.
Waqtiyadan, dhacdooyinku waxay u baahan yihiin badbaado gaar ah iyo tallaabooyin nadaafadeed. Waxaan kuu ballan qaadaynaa in diiraddayadu ay tahay ilaalinta caafimaadkaaga. Hadafkayagu waa cad yahay: abuurista jawi badbaado leh oo khibrad leh intii suurtogal ah si aan awood ugu siinno warshadaha safarka iyo ganacsigaaga inay mar kale koraan. Si taas loo gaaro waxaan si joogto ah ula xiriirnaa mas'uuliyiinta caafimaadka dadweynaha ee ay khuseyso ee Dhulka Berlin.
Waxaad ka heli kartaa wax badan halkan ku saabsan su'aalaha ku saabsan badbaadada iyo nadaafadda.